Kraft Archives - US Ilungelo Lokwazi
I-imeyili yozungu: “IARC iyasibulala!”
Posted on April 19, 2018 by UCarey Gillam
Njengabacwaningi sivame ukubheka imibhalo ukukhanyisa okusha ngezinkinga ezibalulekile kunqubomgomo yokudla. Kwesinye isikhathi, zimane zibonise lokho esesivele sikwazi.
Lokho kunjalo ngentambo eyodwa entsha yezokuxhumana engeza ebufakazini becebo elifinyelela kude labadlali bemboni yezokudla ukwehlisa isithunzi nokunciphisa inkampani ehamba phambili yocwaningo lomdlavuza. Sesibonile imibhalo evela kwaMonsanto nezinye izintshisekelo zomkhakha wamakhemikhali ebeka amapulani ukuqeda ukuthembeka kwe-International Agency for Research on Cancer (IARC) ngenxa yokuhlukaniswa kwayo kwe-Monsanto's weed killer glyphosate njenge kungenzeka i-carcinogen yomuntu.
Manje sibona ubufakazi bokuthi abanye abadlali bemboni yokudla bayingxenye yohlelo; ngisebenzela ukunqanda ukuhlolwa kwe-IARC okungalimaza izithasiselo zokudla njenge-aspartame, i-sucralose, nokuningi.
I-imeyili yozungu itholwe ngesicelo samarekhodi avulekile wombuso. Kukhombisa ukuxhumana phakathi kukaJames Coughlin, usosayensi wesikhathi esisodwa weKraft General Foods Inc. osebenza ngebhizinisi lokubonisana ngokudla kanye “nokudla okunomsoco”, noTimothy Pastoor, isazi sezobuthi esesathatha umhlalaphansi nesikhondlakhondla se-agrochemical Syngenta AG manje oseqhuba eyakhe “yezokuxhumana kwezesayensi ”Ibhizinisi. Futhi okufakwe engxenyeni yochungechunge lwe-imeyili yindoda yaseMonsanto PR uJay Byrne, ophethe "ukuphathwa kwedumela" futhi ibhizinisi lobudlelwano nomphakathi, noDouglas Wolf, owayengusosayensi we-Environmental Protection Agency manje oneSyngenta.
Ku-imeyili ka-Okthoba 2016, uCoughlin utshela uPastoor ukuthi ubelokhu “elwa kanjani no-IARC unomphela !!” esukela esikhathini sakhe eKraft. Ulandisa isikhathi asichitha egxeka i-ejensi yomdlavuza yamazwe omhlaba nomsebenzi wase-US House of Representatives owayehlanganisa umzamo qeda uxhaso lwe-US ku-IARC.
Bese kuthi, lapho ezwakalisa ukwesaba okujulile imboni yokudla ebambe i-ejensi yomdlavuza, ufika enyameni yalolu daba: "IARC iyasibulala!" Uyabhala. Intambo yamakhasi amabili ingatholakala lapha. Ingcaphuno ingezansi:
Ukudla Okucatshangwayo, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane i-aspartame, B-carotene, BPA, umdlavuza, i-iron yokudla, UDouglas Wolf, EPA, Ukudla, glyphosate, IARC, UJames Coughlin, UJay Byrne, Kraft, Monsanto, Isikhungo Senyama YaseNyakatho Melika, izibulala-zinambuzane, RoundUp, sucralose, Syngenta, UTimothy Pastoor
Izibopho ze-CDC Pick Boosts Agency entsha kaTrump eCoca Cola
Posted on July 10, 2017 by UStacy Malkan
New York Times, nguSheila Kaplan, 7/22/2017: "Inkosi entsha ye-CDC uSaw Coca-Cola njengo-Ally ku-Obesity Fight"
IForbes, Ingxenye 2 nguRob Waters, "Inethiwekhi yeCoca-Cola: Ukuxhunyaniswa Kwemigodi Yama-Soda Giant Neziphathimandla Nososayensi ku-Wield Influence"
Ingxenye 1 yezindaba ezi-2
Sekuyiminyaka eminingi i-Coca-Cola Company, okuyiwona othengisa iziphuzo ezinoshukela emhlabeni, ibilokhu ifuna ukuthonya inqubomgomo yezempilo kanye nemibono yomphakathi ngokwakha ubudlelwano nososayensi kanye nezikhulu ezinamandla, kufaka phakathi isikhungo sezempilo somphakathi esiphezulu, iCenters for Disease Control. kanye Nokuvimbela (CDC).
Manje ukuphathwa kukaTrump sekukhona waqoka umphathi omusha we-CDC, UDkt. Brenda Fitzgerald, owaba ngukhomishani wezempilo yomphakathi eGeorgia kule minyaka eyisithupha edlule, wabambisana noCoke ukwenza uhlelo lokulwa nokukhuluphala kwezingane. Coca-Cola I-KO + 0.00% unikeze u- $ 1 million IGAMA laseGeorgia, efuna ukwandisa ukuvivinya umzimba ezikoleni kepha ithule ngokunciphisa ukusetshenziswa kwesoda, yize ucwaningo luthole ukuthi ukudla kakhulu ushukela, ikakhulukazi oketshezi, kungukushayela ukukhuluphala nesifo sikashukela, kanye nomdlavuza nesifo senhliziyo.
Engqungqutheleni yabezindaba ka-2013, uFitzgerald uncome uCoke ngokuthi “umklomelo ophanayo. ” Ubhale i- ukuhlaziya mayelana nobhadane lokukhuluphala ngokweqile kwiwebhusayithi yeCoca-Cola ememezela isidingo sokuthi "abafundi bethu bahambe." Futhi engxoxweni ne isiteshi se-TV sendawo, wakwenza kwacaca ukuthi yini eza kuqala kuye. UGeorgia SHAPE, uthe, "uzogxila kokufanele ukudle" - kanti angasho lutho ngalokho okungafanele ukwenze.
I-ejensi iFitzgerald manje isizosebenza inobuhlobo obumnandi neCoca-Cola. Lokhu kuxhumana kungabonakala kuma-imeyili abesakazeka phakathi kwezikhulu zeCoke, izikhulu ze-CDC kanye nenethiwekhi yabantu abavela emanyuvesi nasezinhlanganweni ezisekelwa izimboni ezixhaswe yizinkampani ezibandakanya iCoke, Nestlé, Mars Inc. neMondelez, eyayaziwa ngeKraft phambilini. Ama-imeyili, akhishwe yi-CDC ephendula izicelo zamarekhodi omphakathi ezithunyelwe yi-US Right to Know, ayaxoxa, kwesinye isikhathi ayakhombisa, ayathandeka futhi kwesinye isikhathi athukuthele futhi ayaphuthuma.
Ku-an Okthoba 2015 i-imeyili, UBarbara Bowman, isikhulu se-CDC esesulile emsebenzini, unikeza ukubonga kwakhe kulowo owayengumphathi weCoca-Cola u-Alex Malaspina ngesidlo sakusihlwa sakamuva. “Sibe nesikhathi esihle kakhulu ngoMgqibelo ebusuku, sibonga kakhulu, Alex, ngokungenisa izihambi.”
Kwenye i-imeyili ka-2015 eya eqenjini lososayensi, bonke abathole uxhaso lwezocwaningo kwaCoca-Cola noma ezinye izinhlangano ezisekelwa yimboni, iMalaspina icela "noma yimiphi imibono yokuthi singalwa kanjani" nezincomo ezivela ekomidini lochwepheshe eleluleka uhulumeni wase-US . Leli komiti lifuna uhulumeni anxenxe abantu baseMelika ukuthi banciphise ukuphuza kwabo ushukela, inyama ne-sodium. Ku-imeyili yakhe, iMalaspina ichitha lezi ziphakamiso ngokuthi "azisuselwa kusayensi."
Futhi ku enye inothi, Isikhulu seCoca-Cola uRhona Applebaum sibhalela isikhulu seCDC nomcwaningi waseLouisiana State University ohola ucwaningo olukhulu ngokukhuluphala kwezingane. Usanda kuthola ukuthi iMexico iyenqaba ukubamba iqhaza ocwaningweni ngoba uCoke uyayixhasa, futhi uyaxolisa. "Ngakho-ke uma ososayensi abenza kahle bethatha i- $$$ ku-Coke – yini - bonakalisiwe?" Uyabhala.
'Kungani uCoke ekhuluma neCDC?'
Ama-imeyili ahlinzeka amazwibela ezindlela iCoca-Cola esebenzisa ngayo ukuxhumana okwenziwe nezikhulu zezempilo nososayensi ukuthonya abenzi bomgomo nezintatheli. Imizamo ize ngokulimaza impilo yomphakathi, ngokusho kwabaphenyi bezemfundo ababuza ukufaneleka kokuxhumana phakathi kweCoke neCDC.
“Kungani uCoke ekhuluma neCDC nakancane? Kungani kunendlela ethile yokuxhumana? ” kubuza uRobert Lustig, isazi sezingane endocrinologist e-University of California San Francisco ocwaninga ngemiphumela yokusetshenziswa koshukela ezinganeni nakubantu abadala. "Oxhumana naye akalungile futhi kusobala ukuthi bazama ukukusebenzisa ukuze babe nomthelela ezinhlanganweni zikahulumeni."
Ama-imeyili amaningi awazange abhekiswe ngqo kunoma ngubani oku-CDC, kepha aphendulwa yi-ejensi ukuhambisana nezicelo zamarekhodi omphakathi. Lokhu kusikisela ukuthi ezinye izikhulu ze-CDC zathunyelwa ama-bcc: noma amakhophi angaboni.
Ama-imeyili abheka inethiwekhi yomhlaba eyenziwe nguMalaspina, owayeyiphini likamongameli omkhulu wezangaphandle kwaCoca-Cola. Inethiwekhi ifaka phakathi:
I-International Life Sciences Institute (ILSI), inhlangano yomhlaba wonke enamalungu ayo, ngokusho kwe- iwebhusayithi yayo "Yizinkampani ezivela ezimbonini zokudla, ezolimo, amakhemikhali, ezemithi, kanye ne-biotechnology kanye nezimboni ezisekelayo." ICoca-Cola ibiphakathi kwabaxhasi bokuqala be-ILSI kanti iMalaspina ibingumongameli wayo oyisunguli. A umqulu wesabelomali okutholwe yi-US Right to Know kusikisela ukuthi uCoca-Cola unikeze i-ILSI $ 167,000 ngo-2012 nango-2013.
I-International Food Information Council (IFIC), engenzi-nzuzo eseWashington esekelwa izinkampani zokudla nezinhlangano zabasebenzi ezibandakanya iCoca-Cola, i-American Beverage Association, iHershey Company kanye neCargill Inc. Ngokwe-website yayo, i-IFIC isebenza “ukuxhumana ngempumelelo nesayensi imininingwane esekwe "ngokudla futhi" isiza izintatheli nama-blogger ukubhala ngempilo, ukudla okunomsoco nokuphepha kokudla. "
Ukuhlanganiswa kososayensi bezemfundo abanomlando wokwenza ucwaningo oluxhaswe yiCoca-Cola noma i-ILSI.
UMalaspina, owaqhubeka nokuzibandakanya neCoca-Cola ne-ILSI ngemuva kokushiya inkampani kasoda, uvela kuma-imeyili njengendawo eyinhloko yokuxhuma kwinethiwekhi. Isibonelo, ngemuva kokucela izeluleko zendlela yokuhlambalaza igama le- Izincomo ze-2015 weDiary Guidelines Advisory Committee, uyayincoma imizamo yoMkhandlu Wokudla ukuthi ibe nomthelela ezintathelini ezibhala ngazo.
UMkhandlu usanda kubamba abezindaba nezintatheli ezingama-40 ukugxeka izincomo zekomidi, i-IFIC eyithathe “njengokwenza idimoni” ushukela, inyama namazambane. Ngemuva kocingo lwabezindaba, abamele i-IFIC baziqhayisa ngememo yangaphakathi ukuthi babe nomthelela ekusakazweni kwezintatheli eziningi. IMalaspina ithola ikhophi yale memo bese iyithumela kozakwabo eCoke nakubantu ebixhumana nabo eCDC.
"I-IFIC iza ngomkhakha," kubhala uMalaspina.
Okhulumela i-CDC, uKathy Harben, uthe nge-imeyili ukuthi i-ejensi yakhe "isebenza nezinkampani ezizimele ngoba ubudlelwano phakathi kukahulumeni nabazimele buqhubekisela phambili inhloso ye-CDC yokuvikela abaseMelika. I-CDC iqinisekisa ukuthi, lapho sihlanganyela nomkhakha ozimele, singabaphathi abahle bezimali esiziphathisiwe futhi sigcina ubuqotho bethu besayensi ngokubamba iqhaza inqubo yokushayisana kwezinhloso zenzuzo lokho kuhloswe ukuba kube lukhuni futhi kungafihli lutho. ”
Ukuxhumana kwezezimali nokuxhumana okungabazekayo phakathi kweCoca-Cola, abacwaningi bezemfundo kanye neCDC kudalulwe emibikweni eminingi eminyakeni emibili edlule.
'I-Energy Balance Network'
Ngo-2015, i-New York Times kwathi kamuva i-Associated Press yabika ukuthi uRhona Applebaum, isikhulu sezempilo nesayensi eCoke, babehlele izibonelelo eNyuvesi yaseColorado naseYunivesithi yaseNingizimu Carolina ukuqala iqembu elingenzi nzuzo, iGlobal Energy Balance Network, lokho "kungafaka ukuhleleka kwengqondo nokucabanga" ezingxoxweni mayelana nokukhuluphala.
Inhloso bekuwukucindezela umbono wokuthi ukuzuza kwesisindo kuhlobene kakhulu nomsebenzi onganele womzimba womuntu ngokusetshenziswa kwabo ushukela nama-calories. Ngemuva kokudalulwa kwezimali zikaCoca-Cola, inethiwekhi yokulinganisa amandla yahlakazwa kwathi iNyuvesi yaseColorado yamemezela ukuthi izobuyisa u- $ 1 million eCoke. U-Applebaum uthathe umhlalaphansi ezinyangeni ezintathu ngemuva kwendaba ye-Times.
Ngonyaka odlule, uBarbara Bowman umemezele ukuthi usethathe umhlalaphansi ovela kwi-CDC ngemuva kwezinsuku ezimbili i-US Right to Know ibike ukuthi weluleke iMalaspina ngezindlela zokuthonya i-World Health Organisation kanye noMqondisi-Jikelele wayo uMargaret Chan. I-WHO ibisanda kukhipha imihlahlandlela incoma ukunciphisa ushukela kakhulu, futhi iMalaspina ibheka lokhu “njengosongo ebhizinisini lethu.”
Amanye amarekhodi atholwe ngonyaka owedlule yi-US Right to Know akhombisa ukuthi uMichael Pratt, umeluleki omkhulu wezempilo yomhlaba kwi-CDC's National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, wayenze ucwaningo olwaluxhaswe yiCoca-Cola futhi waba ngumeluleki we-ILSI.
Ngo-Agasti 2015, emasontweni amabili ngemuva kwendaba ye-Times, uSihlalo weCoca-Cola kanye noMphathi Omkhulu uMuhtar Kent kuvunyelwe ku-Wall Street Journal op-ed enesihloko esithi “Sizokwenza Ngcono” ukuthi imali yenkampani yocwaningo lwesayensi, ezimeni eziningi, "isebenze kuphela ukudala ukudideka nokungathembani." Le nkampani yabuye yadalula ukuthi kusuka ngo-2010 kuze kube sekupheleni konyaka odlule, yayisebenzise imali eyizigidi ezingama- $ 138 yokuxhasa abangaphandle kwabacwaningi nezinhlelo zezempilo futhi yakha “obala”Ukufakwa kuhlu kwamawebhusayithi abemukeli bezimali zayo.
AbakwaCoca-Cola bathi manje bayazisekela izincomo ze-WHO iMalaspina efuna ukuzihlambalaza - ukuthi abantu banciphise ushukela abanawo ube ngu-10% wama-calories abawadlayo usuku ngalunye. "Siluqalile uhambo lwethu lokuya kuleyo njongo njengoba siguqula amasu ethu ebhizinisi abe yinkampani ephelele yeziphuzo," kusho okhulumela iCoca-Cola uKatherine Schermerhorn nge-imeyili.
UCoca-Cola uphinde wathembisa ukuthi uzohlinzeka ngezindleko ezingekho ngaphezu kuka-50% kwanoma yiluphi ucwaningo lwesayensi. Ngabe lokho kuzokwenza umehluko emphumeleni wezifundo? Abagxeki beCoca-Cola bayangabaza, bephawula ukuthi izifundo zangaphambilini ebezixhaswa yiCoke zinciphise imithelela emibi yezempilo yeziphuzo ezinoshukela noma ezinoshukela. Ngizobhekisisa kahle kusasa ezinye zezifundo ezaxhaswa nguCoke - bese ngizidlulisela koxhumana nabo eCDC.
URob Waters ungumbhali wezempilo nesayensi ozinze eBerkeley, eCalifornia futhi uyintatheli ephenya nge-US Right to Know. Le ndaba ivele ekuqaleni Forbes ngoJulayi 10.
Uphenyo lwethu, Abathandekayo U-Alex Malaspina, I-American Beverage Association, UBarbara Bowman, I-Cargill, Centers for Disease Control, Coca-Cola, UDkt Brenda Fitzgerald, IGAMA laseGeorgia, I-Global Energy Balance Network, Hershey, Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke, I-International Life Sciences Institute, UKathy Harben, Kraft, IMars Inc., UMichael Pratt, UMondelez, I-Nestle, URona Applebaum, University of Colorado, IYunivesithi yaseNingizimu Carolina
Ngabe iSenate Democrats Izophanga Ukuhlulwa Emihlathini Yokunqoba ku-GMO Labeling?
Posted on Kwangathi 17, 2016 by UStacy Malkan
Vuselela ngoJuni 27: Umthethosivivinywa omusha "wokuyekethisa" omenyezelwe yiSenator Stabenow "awamukeleki ngokuphelele" futhi mubi ukwedlula owokuqala, kusho abameli babathengi. Funda i- izindaba zakamuva lapha.
Cishe ama-90% aseMelika athi ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo kufanele kufakwe ilebula, ngokusekelwa okuphezulu kuyo yonke iminyaka, izinhlanga kanye nokuzibandakanya kwezepolitiki, ngokusho kukaDisemba 2015 Ukuvota kweMellman Group. Kunzima ukucabanga ngodaba lwezepolitiki olwabelana ngesikhalazo esibanzi. Ukukholelwa kwilungelo lethu lokwazi ukuthi yini ekudleni kwethu kunjengeMelika njengophaya we-apula.
Manje, ngemuva kwempi elwelwe kanzima eholwa yizigidi zabathengi kanye namaqembu ezwe ngobukhulu kwezemvelo, ezempilo kanye nabathengi, siyalinqoba lelo lungelo. Izinkampani ezinkulu zokudla ezivela I-General Mills kuya I-Kellogg kuya UCampbell bathe bafaka amalebula kwimikhiqizo yokudla ukukhombisa ukuthi akhiqizwa ngobunjiniyela bezakhi zofuzo.
Kungenzeka yini ukuhlehlisa le nqubekela phambili? Kungenzeka yini ukuthi amalebula amasha okudla abuyele emafektri afakwe esikhundleni sokungaqondakali ama-black blobs abizwa ngamakhodi we-QR?
Ngabe amaSenate Democrats, aholwa yiDemocrat yaseMichigan uDebbie Stabenow, asezokwenza isivumelwano esizomisa ukufakwa kwelebula le-GMO emikhondweni yalo?
Imboni yezolimo igubuzela iSenate yase-US njengamanje ngomzamo wokugcina wokufuna ukwedlulisa UMNYAMA (Waphika amaMelika Ilungelo Lokwazi) Umthetho, futhi ngaleyo ndlela ichithe imizamo yokulebula yombuso. Kusele amasonto ambalwa nje ukwenza lokhu ngaphambi kokuba iVermont isebenzise umthetho wokuqala ophoqelela ukubekwa uphawu kweGMO wesizwe ngoJulayi 1.
Indlu Yomele yaphasisa UMTHETHO WOBUMNYAMA ngonyaka odlule. Ummeli uJohn Conyers (D-MI) uthe ngaleso sikhathi ku I-CNN op ed, "Ukuthi iCongress icubungula ngisho nesiphakamiso sokwenqabela abantu baseMelika imininingwane eyisisekelo ngokudla kwabo kukhuluma ngamandla amakhulu alawa malungu ezinkampani ngenxa yomphakathi."
Wonke amehlo manje asethe njo kuSenen Stabenow, okungukuthi, ngokusho kuka Umbiko kaHagstrom, ngisanda kuphakamisa ulimi olusha "lokuvumelana." Lokhu kungafaka noma kungafaki amakhodi we-QR, inombolo engu-800, noma enye indlela yokufuna ilebula "ephoqelekile" ngenkathi kuvunyelwa izinkampani zokudla ukuthi zisuse amagama athi "genetic engineering" kumalebula amasha asendleleni eya esitolo esiseduze nawe .
Imininingwane ekulesi sivumelwano ayifani. Kodwa into eyodwa icacile: njengoba i-Democrat esezingeni eliphezulu eKomidini Lezolimo Lezigele, uSen.Stabenow ephethe okhiye bokunquma ukuthi ngabe abaseMelika bazogcina becaciselekile yini, bazofaka amalebula e-GMO asevele edingeka kwamanye amazwe angama-64 emhlabeni jikelele.
Zombili izinhlangothi zenza konke okusemandleni ukumthonya. Njengoba I-Politico ibike, Abaholi bemboni yezimboni babamba ukuqoqwa kwesikhwama sikaSen.Stabenow ngoMashi, ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuvota kokugcina kuMthetho WAMANGQAMA, futhi abaholi bezimboni zemvelo banikele ngamakhulu ezinkulungwane zamaRandi emkhankasweni wakhe ngo-2015 nango-2016.
Ukubuyekezwa kokufakwa kweFederal Election Commission yeminikelo emkhankasweni kaSen.Stabenow ovela ezinkampanini nakumaqembu ezentengiselwano eminyakeni emihlanu edlule kutholile okuncane embonini yezinto eziphilayo - umnikelo owodwa nje ovela kwi-Organic Trade Association ngo-2012 ngama- $ 2,500.
Amaqembu amakhulu okudla, amakhemikhali kanye nezolimo, okwamanje, anikele ngaphezu kuka- $ 100,000 emkhankasweni wakhe ngaleso sikhathi, kufaka phakathi ama- $ 60,000 ahlanganisiwe avela eMonsanto, DuPont, Pepsi, Coca-Cola, Dow, Kraft, Bayer naseConAgra.
Lezo zinhlangano beziphakathi kwabanikeli abaphezulu abayi-10 emikhankasweni yokulwa nokulebula okuchithiwe ngaphezulu kwezingu-$ 100 million ukunqoba izinhlelo zokuvota ze-GMO eCalifornia, Washington, Oregon naseCalifornia - besebenzisa amaqhinga angcolile ukwenza kanjalo, njengama-mail avela amaqembu angaphambili angamanga, izimangalo ezingamanga ku izikhangiso nemihlahlandlela yokuvota, futhi enkulu kunazo zonke ukusebenza kwemali ngokungemthetho emlandweni wokhetho lwaseWashington State.
Kungani lezi zinkampani zesaba ukunika abaseMelika ukukhetha okunolwazi ngama-GMO ekudleni kwethu?
Amaqembu amakhulu amabhizinisi ezolimo athumela umyalezo wokuthi akulona ibhizinisi lethu ukuthi yini ekudleni kwethu nokuthi ikhiqizwa kanjani. Umdwebi wekhathuni wezepolitiki uRick Friday ufunde leso sifundo kabuhlungu ngesikhathi esanda kuba khona uxoshwe emsebenzini seminyaka engama-21 e-Iowa's Farm News ngokukhomba kukhathuni labo baphathi abaphezulu eMonsanto, eDuPont Pioneer naseJohn Deere benza imali eningi ngonyaka odlule kunabalimi abangu-2,129 base-Iowa.
Yini enye lezi zinkampani ezingafuni sazi ngokudla kwethu?
Iqiniso liwukuthi, izitshalo eziningi ezakhiwe ngezakhi zofuzo zenzelwe ukusindisa ama-herbicides, okulungele inzuzo yenkampani yamakhemikhali kepha hhayi okuhle kubalimi nemindeni emiphakathini ekhula nge-GMO efana IHawaii, i-Argentina ne-Iowa - noma abanye bethu okungenzeka ukuthi badla ukudla nsuku zonke lokho iqukethe i-glyphosate, ebisanda kubekwa njenge- mhlawumbe i-carcinogenic kubantu yiphaneli yomdlavuza yeWorld Health Organisation.
Izindaba ezimnandi ukuthi, ukufunwa komthengi ngokusobala manje sekukhulu kakhulu ukuthi singakunaki.
Izindlela zombuso zokufaka ilebula le-GMO ziphumelele ekufundiseni izigidi zabantu ukuthi izitshalo zethu ezibaluleke kakhulu zokudla zenziwe ngezakhi zofuzo ngaphandle kokusebenza obala. Umthetho welebuli kaVermont uyimpumelelo esizweni futhi izinkampani zokudla sezivele zisendleleni yokufaka amalebuli e-GMO okokuqala ngqa emlandweni wase-US.
Uma i-agrichemical lobby iphumelela ekucindezeleni amaDemocrats ukuthi amukele isivumelwano se-Dark Act esifaka noma yini engaphansi kwesibopho sokuphawulwa kwiphakeji, uSen.Stabenow uzokhunjulwa unomphela ngokuhlwitha ukuhlulwa emihlathini yokunqoba ngelungelo lethu lokwazi ukuthi yini ekudleni kwethu.
Le ndaba ekuqaleni yabonakala Huffington Post. Ufuna ukudla okwengeziwe komcabango? Bhalisela i- Incwajana ye-USRTK.
UStacy ungumqondisi obambisene ne-US Right to Know, iqembu elicwaninga ngomkhakha wezokudla. Ungumbhali wencwadi ethi “Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry,” owayeyintatheli futhi engumsunguli womkhankaso weCampaign for Safe Cosmetics. Landela uStacy ku-Twitter: www.twitter.com/StacyMalkan
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO Bayer, Coca-Cola, I-ConAgra, UMTHETHO WOBUMNYAMA, Dow, Dupont, Ukulebula kwe-GMO, Kraft, Monsanto, Pepsi, Rick NgoLwesihlanu, IKomidi Lezolimo Lezigele, AmaSenate Democrats, USenator Stabenow, UStacy Malkan